iwele eliqhelekileyo @ Hotel Shofa Marwah
Ukuhlala eluhambeni bekuhlala kuyinto eqhelekileyo esixekweni, kodwa kule propati imangalisayo, iindwendwe zinokuthatha ixesha labo ukonwabela ukuhlala. Lo mhlaba umi ePalembang, likhaya kwizinto ezininzi ezinomtsalane zasekhaya ezifana neBumi Sriwijaya Stadium, Palembang Icon Mall, Palembang Square, Starbucks Coffee kunye neKuto Besak Fortress.
Ngokuhonjiswa kwayo ngokulula, uya kuziva ngoko nangoko i-ambiance yasekhaya ngoku nje ukuba ungene. Amagumbi awakho banzi kuphela kodwa abonisa ifanitshala yale mihla kunye nokuhonjiswa okukwifashoni. Le yokugqibela idla ngokunxulunyaniswa nokuzola, nto leyo ekhuthaza uxolo lwengqondo kwaye ivumela iindwendwe ukuba zenze okuninzi kokuhlala.
Ipropathi ibonelela ngezinto eziluncedo ngokuhambelana nenkonzo yayo enomtsalane kunye nokuhonjiswa okukhumbulekayo. Oku kubandakanya ukungena kwe-24/7, iNtlawulo yeKhadi, iiKhamera zeCCTV, iKofu / uMenzi weTea, uMcimi woMlilo, i-Wifi yasimahla, iNdawo yokuPaka, iNdawo yoKwamkelwa, uKhuseleko, i-AC ukuze kube lula kwiindwendwe.
Ukuba sembindini wesixeko kunezinto zayo, enye yazo kukufumaneka kokhetho lokutya olufikeleleka ngokulula ngaphandle kokuya kude kakhulu nehotele. Yiya kwiindawo zokutyela ezikufuphi ezifana neLiberica, i-Excelso, iMartabak Kapten, iBebek Syahabi kunye neWarung Elisah ukuze ufumane isidlo esimnandi kwaye ngokuqinisekileyo uya kunqwenela ukubuya kwakhona. Abahambi abananto yokukhathazeka ngayo njengoko i-Stasiun Kertapati ikumgama nje omfutshane ukusuka kwipropathi.